Fantaro Ireo Mpikatroka Telo Avy Ao Afrika Avaratra Miady Amin’ny Fikorontanan’ny Toetr’andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Novambra 2015 5:54 GMT
Fifanakalozan-kevitra Ara-tsosialy Manerantany (World Social Forum) nankalazaina tao Tonizia, namory mpandray anjara manerana an'i Afrika Avaratra. © Thelma Young / 350.org
Ao anatin'ny fiakaran'ny ranomasina sy ny haintany mihamahazo laka, dia mitarika resaka amin'ny olana goavana ara-tontolo iainana ireo tanora mpikatroka ao Afrika Avaratra.
Tokony hieritreritra indroa noho ny mahazatra ve isika alohan'ny handrakofana takelaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro an'i Sahara? Nitarika nankany amin'ny hetsika ara-toetr'andro goavana kokoa ve ny Lohataona Arabo? Inona no azontsika atao mba hipaka any amin'ireo mpanapa-kevitra ara-politika ny feon’ ny vondrom-piarahamonina iharan'ny fiovaovan'ny toetr'andro?
Ao anatin'ity piesy media marolafy iray novokarin'ny 350.org ity, miresaka momba ny anjara birikin'izy ireo amin'ny fananganana hetsika momba ny toetr'andro ao Afrika Avaratra i Thelma Young, i Hoda Baraka ary i Sarah Rifaat, mpikatroka avy any Tonizia, Ejipta ary Maraoka.
Tonizia: Radhouane Addala
Liana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro sy ny korontana ara-toetrandro ary rariny ara-toetrandro aho nandritra ny fiainako manontolo satria izany no fomba iainako, sy nitomboako, mahita izany rehetra izany.
Radhouane dia mpitati-baovao sady mpamokatra sarimihetsika mahaleotena monina any Tonizia, firenena fahatelo manerantany mankatò ny fiovana ara-toetrandro ao anatin'ny lalàmpanorenany. Mitantara ireo olan'ny fiovaovan'ny toetrandro ao Tonizia ny lahatsary fanadihadiana nataony “A Siege of Salt and Sand” [ny fahiranon'ny sira sy ny fasika] notontosaina tamin'ny alalan'ny fanangonam-bola. Ny lohateny dia mampiditra ny tantaran'ny firenena iray “ataon'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina sy ny haintany fahirano”. Apetrany fotsiny hoe: “Raha tsy mihetsika isika, dia ho lasa tany bitika kely iray mihitsoka eo anelanelan'ny morontsiraka sy ny tany hay.”
Raha mijery ny vahoaka Toniziana taloha sy taorian'ny revolisiona ianao, dia afaka mahatsapa fa nisy fiovana lehibe. Sambany ny olona nahatsapa fa izy ireo no tompon'ny firenena. Ka nitondra adihevitra momba ny fiovan'ny toetrandro sy ny korontan'ny toetrandro teo ambonin'ny latabatra izany. Izay, taty aoriana, nanosika ireo solontenam-pirenena sy ny antenimieran-dalàmpanorenana hametraka an'i Tonizia ho firenena fahatelo manaiky ny fisian'ny fiovaovan'ny toetr'andro ao anatin'ny lalàmpanorenany manokana.
Jereo ny sombin'ny sarimihetsika “A Siege of Salt and Sand”
Maraoka: Fadoua Brour
Tsy nisafidy ho lasa mpikatroka ara-toetrandro aho. Fa lasa zavatra nametraka ny tenany ho olana manerantany izany, olana mandrahona ny fiarovana ity planeta ity.
Izany no nanosika ahy hanao zavatra.
Fadoua no mpanorina sady filohan'ny Hetsiky ny Tanora Maraokana misahana ny Toetr'andro. Tiany hanana hoavy tsara kokoa i Maraoka, saingy maniry koa izy mba hisy ny fiampitàna any amin'ny angovo ara-drariny sy mitovy ho an'ny rehetra, izay midika fa jerena koa ny zo sy fitakian'ny olona ao an-toerana voakasik'izany. Araka ny filazany hoe: “raha olana iaraha-manana no lazaina, ary raha fiarovana ny olona eo amin'ity tany ity no resahana, tsy maintsy mampiditra ireo olona ireo – ny olon-drehetra – ao anatin'ny adihevitra ianao.”
Ka alohan'ny hitehafanao an'i Maraoka noho ny fananganana takelaka mandeha amin'ny herin'ny masoandro goavana indrindra manerantany, eritrereto ny fomba fiantraikan'izany eo amin'ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana izay efa miaina ny krizy ara-drano.
Tsy resaka hetsika manana tanjona betsaka ihany izany, fa fizarana hetsika manana tanjona betsaka amin'ny olona voakasika sy fametrahana politika amin'ny fomba marina.
Vehivavy Toniziana manao diabe ho an'ny zo sy ny ho avin'izy ireo nandritra ny Forum Ara-tsosialy Manerantany. © Thelma Young / 350.org
Ejipta: Sarah Rifaat
Efa miantraika amin'ny fiarahamonina ao amin'ny tapany avaratra ao Ejipta, izay monina ao amin'ny Vinanin'i Neily sy akaiky ny Ranomasina Mediteranea ny fiovaovan'ny toetrandro satria miha-mandifotra ny tany fambolena ny fiakaran'ny haavon-dranomasina. Misy ireo tantsaha voatery mandao ny tanànany noho ny ranomasina miditra ao amin'ny tanin'izy ireo.
Nisy fiantraikany teo amin'ireo tantsaha any amin'ny faritra hafa ny fiovaovan'ny vanim-potoana; tandindonin-doza hatrany ny ao amin'ny Ranomasina Mena sy ny fiainana an-dranomasina ao. Miseho manodidina antsika rehetra ny fiantraikany.
Mpandrindra ny Tontolo Arabo ao amin'ny 350.org i Sarah. Taona maro lasa izay, tsapany fa mihoatra lavitra kokoa noho ny orsa an-tendrotany ny fiovaovan'ny toetr'andro. Amin'ny maha-Ejiptiana azy, nahita ohatra maro momba ireo vondrom-piarahamonina voatery nifindra toerana noho ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina imbetsaka izy.
Miahiahy amin'ny fampifanarahana ara-toetr'andro sy ny rariny ara-toetrandro izy. Manontany ny fepetra fampifanarahana tahaka ny fefy lehibe miaro ny indostria manankarena amin'ny fiakaran'ny haavon'ny ranomasina ary mety mampidi-doza ny fiarahamonina mipetraka ao izy, na ny politika fanaovan-dalàna mandrisika ny fandraharahana ara-pambolena goavana hitaky ny tany nilaozan'ny fiarahamonina nafindra toerana. Ho an'i Sarah, ireo no ohatra “mifanohitra amin'ny rariny ara-toetr'andro”.
Manomboka mahatsikaritra ny toetr'andro tafahoatra ny olona. Mampahatahotra ny mieritreritra fa raha lasa tena tafahoatra izany, ary mahatsapa izany ny tsirairay, midika ve izany fa tara loatra?
Manangana hetsika ho an'ny toetr'andro manerantany ny 350.org. Navoaka indray teto amin'ny Global Voices ity lahatsoratra ity noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.